पाइलटहरुले किन गर्दैछन् अजयको फिल्मको विरोध ? « pennepal.com
पाइलटहरुले किन गर्दैछन् अजयको फिल्मको विरोध ?
Published On :4May, 2022 8:49 am By :
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अजय देवगन हालै रिलिज भएको फिल्म रनवे ३४ लाई लिएर चर्चामा छन् । जसमा अजयले पाइलटको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर भारतीय पाइलट महासंघले अजयमाथि यो फिल्ममा पाइलटहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएको छ । चलचित्र वास्तविक घटनामा आधारित रहेको दाबी गरिएको छ । तर, चलचित्र पूर्णतया काल्पनिक कथामा आधारित रहेको महासंघले जनाएको छ ।
सन् २०१५ मा दोहाबाट कोचीको विमानको क्रयास ल्यान्डिङको वास्तविक कथामा आधारित यो फिल्म रहेको दाबी गरिएको छ । खराब मौसम र कम भिजिबिलिटीका कारण विमान दुर्घटना हुँदा धेरै यात्रुको मृत्यु भएको थियो । तर पाइलट महासंघले फिल्ममा देखाइएका कुरा सत्यताभन्दा टाढा रहेको बताएको छ ।
पाइलट महासंघका सचिव क्याप्टेन सिएस रन्धावाले ‘रनवे ३४’ को निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनले भने, ‘फिल्ममा पाइलटको पेशालाई जसरी चित्रण गरिएको छ, त्यो सत्यभन्दा टाढा छ । फिल्ममा जसरी चित्रण गरिएको छ, त्यसले विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुको मनमा अनेक किसिमका भ्रम पैदा गर्न सक्छ ।
म्याडभेन्चर शो चलाउँदै अनुप र सौगात
काठमाडौं । अभिनेता अनुपविक्रम शाहीको सञ्चालन र सौगातमान सिंह बस्नेतको निर्देशन रहने एडभेन्चर रियालटी शो
गायिका दिलमाया आफ्नै डेरामा मृत फेला, १ जना पक्राउ
काठमाडौं । दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृत भेटिएकी छन् । प्रहरीका अनुसार शनिबार राति ११
डान्सिङ स्टार्सको उपाधि छिरिङ र सरोजको जोडीलाई
काठमाडौं । रियालिटी शो डान्सिङ स्टार्स नेपालको उपाधि छिरिङ शेर्पा र सरोज प्रजाको जोडीले जित्न
पूर्व मिस ब्राजिलको २७ वर्षको उमेरमा निधन
एजेन्सी । पूर्व मिस ब्राजिल ग्लेसी कोरेइयाको २७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । टन्सिन